Fahafahana sy valim-pifandraisana PR an-tserasera | Martech Zone
Alakamisy Febroary 9, 2012 Alatsinainy 8 Febroary 2016 Douglas Karr
60% ny Amerikana hitsara ny orinasanao mifototra amin'ny fisianao amin'ny Internet. Saintsaino kely izany. Na dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatrehanao an-tserasera aza ny tranokalanao, misy zavatra hafa betsaka noho izany. Mikaroka ny marikao ny olona ary mitsara ny orinasanao mifototra amin'ny zavatra mipoitra amin'ny motera fikarohana ihany koa.
Manampy anao ny fampiasam-bola amin'ny PR an-tserasera tantano ny fanatrehanao an-tserasera
Ny tiako indrindra amin'ity infographic ity dia ny manome fampidirana amin'ny habetsaky ny tabataba any ivelany sy ny habetsahan'ny mpanjifa mahatanty izany. Satria ny orinasa sy ny orinasa dia mitady ny marikao, amin'ny Internet Paikadin'ny PR afaka manampy anao ho hita amin'ny fomba mandaitra kokoa. Tianay ny miara-miasa amin'ny orinasan PR, Dittoe PR… azon'izy ireo atao ny miantoka ny mpanjifanay hita any amin'ireo toerana mazoto indrindra ny mpihaino azy ireo.
Infographic avy amin'ny PRMarketing.com.
Tags: online prfifandraisana amin'ny Internetpr infographicpr fotoanavaliny prfanontana
Fomba 10 hampitomboana ny varotra amin'ny 2012